Maraykanka oo Soo Dhoweeyey Go’aan Ka Soo Baxay Mucaaradka Kenya – Radio Daljir
Agoosto 18, 2017 5:50 b 0
Dowlada Mareykanka ayaa soo dhaweysay go,aanka isbaheysiga Mucaaradka Kenya ee Nasa ay qaateen oo ah in Maxkamada Sare ay Dacwad ka dhan ah u Gudbiyaan Doorashadii dalka Kenya ka dhacday toobaadkii la soo dhaafay.
War Murtiyadeed ka soo baxay Safaarada Mareykanka ee Magaalada Nairobi oo uu ku saxiixnaa safiirka Mareykanka u fadhiya Caasimada Nairobi Mr. Robet Godec ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu taagerayo in cabashada Mucaaradka Kenya ay qabaan lagu dhameeyo hanaan Maxkamadeed oo waafaqsan sharciga.
Dhanka kale Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay in mudo dheer ay saaxiib dhow la aheyd Kenya ayna sii wadeyso sidii lagu xalin lahaa muranada Madaxtinimo ee dalka Kenya Doorashadii ka dhacday.
Warka Ka soo baxay safaarada Mareykanka ee Nairobi ayaa sidoo kale lagu sheegay in hanaanka Maxkamada Sare ee dalka Kenya ay tahay qaabka Dastuuriga ah ee lagu xalin karo walaaca ay qabaan isbaheysiga Mucaaradka ah ee NASA oo ku aadan in Doorashadii Madaxtinimo aysan u dhicin qaab aan habooneyn.
Dhanka Kale safaarada Mareykanka ee Nairobi ayaa waxa ay ka hadashay wararka sheegaya in Muwaadiniin Kenyan ah dil iyo Dhaawac loogu geystay rabshado ka dhacay Magaalooyinka Nairobi Kisumu iyo goobaha kale oo ay Mucaaradku ku xoogan yihiin kadib markii 11-kii bishan Gudiga Doorashada ay shaaciyeen Natiijadii Doorashada.
Mr. Godec ayaa sheegay in Kenya ay leedahay Dastuur siinaya dhamaan Muwaadiinta in ay sameyn karaan Dibad bax nabadeed ayna Dowlada Mareykanka ka xun tahay dhibaatada soo gaartay Dibad baxayaasha taageersanaa Mucaaradka.
Dowlada Mareykanka ayaa Dhanka kale Ku boorisay saraakiisha amniga in aysan xoog u isticmaalin ayna ilaaliyaan nolosha iyo hantida Dadweynaha.
Safiirka Mareykanka ee Magaalada Nairobi Mr Robet Godey ayaa ugu baaqay Gudiga Madaxa Banaan ee baara Tacadiyada ay galaan Booliska ee loo Yaqaan IPOA) in ay baaritaan ku sameeyaan saraakiisha lala xiriiriyay in ay Tacadiyada dadweyne galeen kadib Doorashadii ka dhacday Kenya.
Ugu dambeyn Safiirka Mareykanka u fadhiya Magaalada caasimada ee Nairobi ayaa soo dhaweyay hadalka Madaxweynaha la doortay ee Kenya iyo hogaamiyeyaasha kale ee dalkaas oo ku aadan in laga shaqeeyo Midnimada shaqsi kasta oo Kenyan ah ay Masuuliyad ka saaran tahay in uu ka shaqeeyo midnimada.
C/qani Maxamed,Radio Risaala, Nairobi.